June 22, 2021 - Channel Lover
စိုးရိမ်စရာပါ။ ကိုဗစ်လူနာထားဖို့ ကုတင် ၂၀ လောက်သာကျန်တော့တယ်
June 22, 2021 by Channel Lover
စိုးရိမ်စရာပါ။ ကိုဗစ်လူနာထားဖို့ ကုတင် ၂၀ လောက်သာကျန်တော့တယ် စိုးရိမ်စရာပါ!! ဗန်ကောက်တစ်မြို့လုံးတွင် လူနာထားဖို့ ကုတင် ၂၀ လောက်သာ ကျန်ပါတော့တယ် ကုသရေးညွှန်ချုပ်က ကိုဗစ်၁၉ အစုအပြုံလိုက်ကူးစက်လူနာတွေ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ထပ်တိုးနေတာတွေ့ရတယ်။ အထူးသဖြင့် ဗန်ကောက်မြို့နဲ့ နီနားခရိုင်များကဖြစ်ပါတယ်။ ဇွန်လ ၂၁ ရက်နေ့ အချက်အလက်တွေမှာဆိုရင် အစိုးရဆေးရုံများမှာ ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရလို့ အထူးကြပ်မတ်ဆောင် သုံးနေရတဲ့ ဦးရေ ၄၀၉ ဦးရှိခဲ့ပြီး။ နောက်ထပ် ကုတင် ၂၀ လောက်သာ ကျန်တော့ပါတယ်။ ချန်ထားရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က အရေးပေါ်ကူးစက်ခံနေရတဲ့ လူနာတွေအတွက်သာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ အဝါရောင်အဆင့်လူနာဟာ ၃၉၃၇ ဦးကို ကုသမှုပေးနေရပါတယ်။ အဝါရောင်အဆင့် ကိုဗစ်၁၉ လူနာသစ်အတွက်လဲ ကုတင် ၃၀၀ ဝန်းကျင်သာကျန်တော့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဝါရောင်အဆင့်ဆိုပေမယ့် စိုးရိမ်နေရတဲ့အထဲမှာ ရှိနေပါတယ်။ ဗန်ကောက်တစ်မြို့လုံးရှိ … Read more
အဆိုတျောရမှေနျ ငှကျဖြားကွောငျ့သတောမဟုတျ(သဆေုံးရတဲ့ ဖွဈရပျမှနျ)
June 23, 2021 June 22, 2021 by Channel Lover
ရေမွန် သေဆုံးမှုမှာ ငှက်ဖျားကြောင့် မဟုတ်ဘဲ သေဆုံးရသည့်ဖြစ်ရပ်မှန်ကို ပြောပြလာတဲ့ နိုဗန်ထူး ရေမွန် အစာအိမ်သွေးကြောပေါက်၍ ကွယ်လွန်ဟု ဆရာဝန်သုံးသပ်ချက်ကိုးကားပြီး နိုဗန်ထူး ပြော၊ ငှက်ဖျားကြောင့် မဟုတ်သည့်အပြင် စစ်လော်ဘီများ ဖွနေသကဲ့သို့လည်း မဟုတ်ကြောင်း ရှင်းလင်း အဆိုတော် ရေမွန်သည် အစာအိမ်သွေးကြောပေါက်၍ ကွယ်လွန်ခြင်းဖြစ်ပြီး ငှက်ဖျားကြောင့် မဟုတ်သည့်အပြင် စစ်လော်ဘီများ ဖွနေသကဲ့သို့လည်း မဟုတ်ကြောင်း နိုဗန်ထူးက သူ၏ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် ရေးသားပြောဆိုသည်။ “နဂိုကတည်းက ကိုတွတ်က အစားအသောက် မမှန်ခဲ့မိတာ … အိပ် သိပ်မပျော် / နေမကောင်းတာ … လေးတွေ ရှိခဲ့တယ် …အရင်နေ့တွေကလည်း အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေး နည်းနည်းပါးပါး သောက်နေခဲ့ရသေးတယ် ။ ဒါပေမယ့် ခုတလော နေပြန်ကောင်းနေ / အိပ်လို့လည်း … Read more
ဇွန်လ (၂၂) ရက်နေ့မှ (၂၅)ရက်အတွင်း မိုးရွာသွန်းမယ့်ဒေသများနှင့် နေ့စဉ်မိုးလေ၀သ သတင်း
ဇွန်လ (၂၂) ရက်နေ့မှ (၂၅)ရက်အတွင်း မိုးရွာသွန်းမယ့်ဒေသများနှင့် နေ့စဉ်မိုးလေ၀သ သတင်း ဇွန်လ ၂၂ရက်နေ့မှ ၂၅ရက်နေ့အတွင်းမြစ်ကြီးနား ဝိုင်းမော် ဆဒုံး ချီဘွေ ကန်ပိုက်တီ မိုးတွေရွာနိုင်ပါတယ် ၂၀၂၁ ဇွန်လ ၂၈ရက်နေ့မှ ဇူလိုင်လ ၅ရက်နေ့အတွင်း ကခထင်ပြည်နယ်အထက်ပိုင်းတွင် ထူးကဲမိုးများ များစွာရလာသွန်းနိုင်ပြီး ဧရာဝတီမြစ် ချင်းတွင်းမြစ်ရေများ စိုးရိမ်ရေမှတ်များ သို့ ရောက်ရှိလာနိုင်ပါတယ် (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၂)ရက်နေ့ ညနေ(၄:၀၀)နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက်) ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အခြေအနေ။ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့တွင် မုတ်သုံလေ အားအသင့်အတင့် ရှိနေပါသည်။ မနက်ဖြန်နံနက်အထိခန့်မှန်းချက်။စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ပိုင်း)တို့တွင် နေရာကွက်ကျား၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ကယားပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကျဲကျဲ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)နှင့် ကရင်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်နှင့် ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာအနှံ့အပြား … Read more
သင်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ ဖိနပ်အမျိုးအစားကပြောပြပေးမယ့် သင်နဲ့အသင့်တော်ဆုံး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်
သငျရှေးခယျြလိုကျတဲ့ ဖိနပျအမြိုးအစားကပွောပွပေးမယျ့ သငျနဲ့အသငျ့တျောဆုံး အသကျမှေးဝမျးကွောငျးအလုပျ နံပါတျ (၁) ဖိနပျ နံပါတျ (၁) ဖိနပျကိုရှေးခယျြခဲ့မယျဆိုရငျတော့ သငျဟာ စိတျဓာတျမာကွောတဲ့လူတဈယောကျဖွဈပွီး တဈခုခုဆိုရငျ စိတျလိုကျမာနျပါလုပျတကျလရှေိ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ပွိုငျဆိုငျလိုစိတျပွငျးထနျသူတဈဦးပါ။ ဒီလိုလူမြိုးတှကေ အကြိုးအမွတျကိုအခွခေံပွီး ပွုလုပျရတဲ့ အရောငျးစာရေးလို အလုပျအကိုငျမြိုးနဲ့သငျ့တျောတဲ့အပွငျ အောငျမွငျတဲ့စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျတဈယောကျဖွဈနိုငျတဲ့ အလားအလာကောငျးတှေ ရှိပါတယျ။ နံပါတျ (၂) ဖိနပျ နံပါတျ (၂) ဖိနပျကိုရှေးခယျြခဲ့မယျဆိုရငျတော့ သငျဟာ တညျတညျငွိမျငွိမျနဲ့စဉျးစားတှေးချေါပွီး အလုပျလုပျတကျတဲ့လူတဈယောကျပါ။ ဒါ့အပွငျ သငျဟာ အဖှဲ့အစညျးနဲ့ပူးပေါငျးလုပျဆောငျတကျတဲ့သူတဈဦးဖွဈတဲ့အပွငျ အမွဲတမျးသငျ့ရဲ့ရညျမှနျးခကျြဖွဈမွောကျအောငျ အာရုံစိုကျတကျပါတယျ။ သငျဟာ လကျဝတျလကျစား၊ ကားအရောငျးအဝယျ နဲ့ ပနျးအလှပွငျတဲ့နယျပယျတှမှော ကြှမျးကငျြပါတယျ။ ဒီလိုလူမြိုးတှနေဲ့အသငျ့တျောဆုံး အသကျမှေးဝမျးကွောငျးတှကေတော့ စာရငျးကိုငျ၊ရှနေ့ေ၊ စားဖိုမှူး၊ ဆရာ နဲ့ ဒီဇိုငျနာ အလုပျတှပေဲဖွဈပါတယျ။ နံပါတျ (၃) ဖိနပျ … Read more
မန္တလေးမြို့တွင် စကစဘက်မှ လောင်ချာအသုံးပြုခဲ့သော ဗီဒီယိုဖိုင် ထွက်ပေါ်
မန္တလေးမြို့တွင် စကစဘက်မှ လောင်ချာအသုံးပြုခဲ့သော ဗီဒီယိုဖိုင် ထွက်ပေါ် မန္တလေးမြို့တွင် စကစ နှင့် မန္တလေး PDF အဖွဲ့ တိုက်ပွဲမှာ ဒလန်ကောင်ကြောင့် မနက်ရနာရီ ဝန်းကျင်မှစပြီး တိုက်ပွဲစတင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရာ ယခုချိန်ထိ ပြီးဆုံးခြင်းမရှိသေးပေ။ စကစ ဘက်မှ သတင်းအမှားများ ဆက်တိုက်ထုတ်ပြန်လျက် ရှိသော်လည်း မန္တလေး PDF အဖွဲ့မှ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးခေါင်းဆောင်မှာ သတင်းအမှားများအား ပြန်လည်ဖြေရှင်းပြီးဖြစ်သည်။ ယခုအခါတွင် စကစဘက်မှ လက်နက်ကြီးများအသုံးပြုသည့် ဗီဒီယိုဖိုင် ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် ပြည်သူများမှ ဒေါသထွက်လျက်ရှိသည်။ ဗီဒီယိုဖိုင်အား အောက်ဆုံးတွင်ကြည့်ရှုရန် Video Credit unicode မန်တလေးမွို့တှငျ စကစဘကျမှ လောငျခြာအသုံးပွုခဲ့သော ဗီဒီယိုဖိုငျ ထှကျပျေါ မန်တလေးမွို့တှငျ စကစ နှငျ့ မန်တလေး PDF အဖှဲ့ တိုကျပှဲမှာ ဒလနျကောငျကွောငျ့ … Read more
မန္တလေးမှာ PDF နှင့် စစ်တပ် တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ရုပ်သံ ထွက်ပေါ်လာ
မန္တလေးမှာ PDF နှင့် စစ်တပ် တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ရုပ်သံ ထွက်ပေါ်လာ ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။ Update News- PDF ဆုတ်ခွာနိုင်ဆို​သော သတင်းအမှားများ ပြန့်​နေ၊ သံချပ်ကာကားများ နန်းတွင်းမှ ထွက်လာ ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၂၂ မန်း​လေးတွင် စစ်​ကောင်စီတပ်နှင့် PDF ​ပျောက်ကျား တပ်ဖွဲ့တချို့ ပစ်ခတ်မှူဖြစ်ပွား​နေရာတွင် PDF များ ​အောင်မြင်စွာ ဆုတ်ခွာနိုင်ဆို​သော သတင်းအမှားများ ကို လူမှုကွန်ရက်တွင် ဖြန့်​ဝေ​နေကြသည်ဟု ​တော်လှန်​ရေး လူငယ်တချို့က ​ပြောသည်။ စစ်​ကောင်စီ၏ သံချပ်ကား ၃ စီး နန်းတွင်းမှ ထွက်လာပြီး မြို့​ပေါ်တွင် ကင်းလှည့်လျက်ရှိ​ကြောင်း သိရှိရသည်။ credit unicode မန်တလေးမှာ PDF နှငျ့ စဈတပျ တိုကျပှဲဖွဈနတေဲ့ရုပျသံ ထှကျပျေါလာ … Read more
ယနေ့တွင် ဓါတ်အားဖြတ်တောက်မည့် မြို့နယ်များ
ယနေ့တွင် ဓါတ်အားဖြတ်တောက်မည့် မြို့နယ်များ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးရှိ မြို့နယ်(8)ခုတွင် လျှပ်စစ် ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် မလွတ်ကင်းသော သစ်ပင် သစ်ကိုင်းများ ခုတ်ထွင် ရှင်းလင်းခြင်း၊ ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ဓာတ်အားခွဲရုံများ ထိန်းသိမ်း ပြုပြင်ခြင်းကို (၂၂.၆.၂၀၂၁) ရက်နေ့၊ အင်္ဂါနေ့တွင် (၀၉:၀၀)နာရီမှ (၁၂:၀၀)နာရီ အချိန် အတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်း။ ဒဂုံဆိပ်ကမ်း ကမာရွတ် သန်လျင် ကျောက်တန် လှည်းကူး ဖောင်ကြီး မင်္ဂလာဒုံ ထောက်ကြန့် မြို့နယ်များ၏ ရပ်ကွက် နေရာ အချို့တို့တွင် ယာယီ ဓာတ်အားပြတ် တောက်နိုင်မည် ဟု ရန်ကုန် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကော်ပိုရေးရှင်းမှ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားသည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက 1717 သို့စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်…. ခရက်ဒစ် unicode ယနတှေ့ငျ … Read more
Update News- မန္တလေး PDFပျောက်ကျားတပ်ခွဲတစ်ခုကို စစ်ကောင်စီတပ်က ဝင်စီး(ရုပ်သံ)
Update News- မန္တလေး PDFပျောက်ကျားတပ်ခွဲတစ်ခုကို စစ်ကောင်စီတပ်က ဝင်စီး၊ ပြည်သူများအနေဖြင့် PDF များ လုံခြုံရေးအတွက် ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုများ လူမှုကွန်ရက်တွင် မဖြန့်ဝေရန် PDF က မေတ္တာရပ်ခံ၊ စစ်ကောင်စီက အင်အားတိုးချနေ မန္တလေးရှိ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး ပျောက်ကျားတပ်ခွဲတစ်ခုကို အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များက ဝင်စီးသဖြင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီး ပြည်သူများအနေဖြင့် PDF များ လုံခြုံရေးအတွက် ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုများ ရိုက်ကူး၍ လူမှုကွန်ရက်ပေါ် တင်ခြင်း ဖြန့်ဝေခြင်း မပြုလုပ်ရန် PDF က မေတ္တာရပ်ခံလိုက်သည်။ လက်ရှိတွင် စစ်ကောင်စီတပ်များသည် မန္တလေး တစ်မြို့လုံးကို အင်အားတိုးချဲ့ ချထားနေကြောင်း မန္တလေးဒေသခံများက ပြောဆိုသည်။ “ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပျောက်ကျားတပ်ခွဲတစ်ခု ဝင်းစီးခံရခြင်းနှင့်အတူ စကစ အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်မှုတွင် မန္တလေးပြည်သူတွေရဲ့အကူအညီကို များစွာလိုအပ်ပါသည်။ အခြားPDFတပ်ခွဲများမှ … Read more
ယနေ့မိုးရွာမယ့်ဒေသများနှင့် နေ့စဉ်မိုးလေ၀သသတင်း ဂွ ငွေဆောင် ခေဖာက်းသာ လပွတ္တာဘိုကလေးမိန်းမလှကျွန်း ဖျာပုံမအူပင် ဒေးဒရဲကျိုတ်လတ် ဒလ ရန်ကုန် သံလျှင် မိုးကြီးနိုင်ပါတယ် ဖျာပုံ ဒေးဒရဲ ကျိုတ်လတ် ကွမ်းခြံကုန်း တွံတေး ဒလ ရန်ကုန် သံလျှင် ကျောက်တန်း တံတားမြို့ သုံးခွ ခရမ်း မိုးတွေရွာပါမယ် နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်း (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၂)ရက်နေ့ နံနက်(၇:၀၀)နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက်) ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အ‌ခြေအနေ။ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့တွင် မုတ်သုံလေ အားအသင့်အတင့် ရှိနေပါသည်။ ယနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) တို့တွင် နေရာကွက်ကျား၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)တို့တွင် နေရာကျဲကျဲ စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်း၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ ကယားပြည်နယ်နှင့် ကရင်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်နှင့် ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တို့တွင် … Read more